Milan 3-1 Roma: Rossoneri Oo Guul Ka Gaartay Roma Hal Dhibicna U Jirsatay Inter Milan
HomeWararka CiyaarahaMilan 3-1 Roma: Rossoneri oo guul ka gaartay Roma Hal dhibicna u jirsatay Inter Milan
January 7, 2022 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
Milan ayaa hal dhibic u soo jirsatay kooxda Heysa Hogaanka Serie A-da ka dib markii ay 3-1 ku garaacday kooxda Jose Mourinho ee Roma kulan ka dhacay garoonka San Siro, iyadoo qaybta dambe lagu soo koobay sagaal ciyaartoy.
Goolal ay dhaliyeen qeybtii hore ee ciyaarta Olivier Giroud iyo Junior Messias ayaa kooxda martida loo ahaa ka dhigay mid aad u fiican ka hor inta uusan Tammy Abraham u soo celin Roma gool waxana lagu kala nastay 2-1.
Milan ayaa hogaanka qabatay iyadoo Giroud uu dhaliyay rigoore daqiiqadii 8aad ka dib markii Abraham lagu xukumay inuu taabtay kubad uu soo tuuray Theo Hernandez.
Arrimuhu ayaa hogaanka u sii dheereeyay Ac Milan markii uu helay kubad birta ku dhacday oo ka timid Giroud Daqadii 15aad lakin qeybta hore Abraham ayaa gool u soo celiyay Roma waxana lagu kala nastay 2-1.
Ac Milan ayaa hogaanka ciyaarta dheereesatay kadib markii Xidiga R. Leao uu dhameestiray kubad ka timid Z. Ibrahimovic, Kooxda Ac Milan ayaa fursad kale qasaarisay markii Rigoore loo dhigay Z. Ibrahimovic uu iska qasaariyay guud ahaan ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-1.
Milan ayaa u safreysa Venezia kulanka hore ee axada, halka Roma ay wajihi doonto kulan weyn oo ay Juventus kula ciyaari doonto Stadio Olimpico isla maalintaas.